‘ Toy Ny Dia Tsy Mety Ho Tapitra’ Ho An’Ilay Syriana Mpitsoa-Ponenana Iray Nandeha Sambo Niampita An’I Gresy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2016 9:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Ελληνικά, عربي, 日本語, Italiano, English
Maro ny zavatra efa notantaraina momba ny mpitsoa-ponenana tao anatin'ny roa taona farany. Kanefa isika tsy maheno firy ny mpitsoa-ponenana mivantana afa-tsy sombiny kely ihany. Nanao fanadihadiana tamin'ny tanora Syriana dimy izay nanao ny fanapahan-kevitra sarotra tamin'ny fandaozana ny tanindrazany – ary nanatanteraka dia nampatahotra tany ivelan'ny firenena, ho any Torkia, ho any Gresy sy manerana ny faritra atsimon'i Eoropa, ny GlobalPost, fikambanam-baovao iraisam-pirenena ao amin'ny fianakaviamben'ny PRI, .
Nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 31 May 2016 ity lahatsoratra avy amin'i Rena Khalid Moussa, 29 ity, ary nivoaka eto nahazoana alalana.
Tsy azo atao intsony ny mijanona ao Torkia. Nibahana tao antsaiko ny hevitra ho any Eoropa. Toy ny nofinofy ihany ny hahita asa tsara ao Tiorkia, na dia manana diplaoma oniversite aza ianao.
Nanomboka ny diako tany Istanbul aho. Izmir no fiatoana voalohany eo amin'ny Ranomasina Égée. Niantso ireo mpiara-monina amiko any Syria aho, izay fantatro fa efa nonina tany Izmir, mba hanontany raha afaka mijanona andro vitsivitsy mandram-piantson'ireo mpanondrana an-tsokosoko ny fotoana mba hialana. Rehefa afaka roa andro niarahana taminy, niantso ahy ho any amin'ny toerana fihaonana ny olona nianteherako mba handamina ny zavatra miaraka amin'ireo mpanondrana an-tsokosoko . Mbola vao dingana vitsivitsy monja niala ny trano raho dia niantso indray izy nilaza fa nofoanana iny alina iny ilay dia- niova ny toetrandro. Niverina tany amin'ny tranon'ny namako aho noho izany.
Ny ampitson'iny, niantso ahy indray izy. Androany vao tena hanainga hoy izy . Noho izany namboariko ny kitapoko ary nentiko ny salotrainako, izay novidiako lafo be. Nisy ny fitohanan'ny fifamoivoizana ka tara ora antsasakadiny aho tamin'ny fihaonako taminy. Tezitra be tamiko ilay mpanondrana an-tsokosoko. Nilaza izy fa mavesatra loatra ny kitapoko ka tsy afaka entiko izany. Nolazaiko azy fa maro ny zava-dehibe ao anatin'ilay kitapo. Hoy aho hoe vehivavy aho, ary ny vehivavy mila zavatra maro, fa tsy tahaka ny lehilahy.
“Lainga fotsiny ny hevitr'ilay dia azo antoka sy toetr'andro tsara izay nampiasainay mba hampaherezana ny tenanay. Fantatro fa mpandainga izy rehetra, mahazo harena amin'ny fanondranana olona.”
Nandeha fiarakaretsaka izahay ho any amin'ilay toerana hamonjy ireo hafa. Nomeko 1.200 euros ( 1.300$) izy teny an-dalana. Izay no saran'ny fiampitana ranomasina ho any Gresy, izay mety ahafahako hanomboka ny diako ho any Eoropa. Talohan'ny nahatongavanay teny amorontsiraka, dia nahazo antso avy amin'ny mpanondrana an-tsokosoko hafa izy. Nilaza taminy ireo mba hiverina, satria nofoanana indray ilay dia. Tsy maintsy naloa ny volan'ny fiarakaretsaka. Mbola 200 Lira Tiorka ihany koa (70$ ). Tsy dia tena gaga aho. Tsy manantena na inona na inona avy amin'ny dia tsy ara-dalàna aho. Nalaiko ny volako ary nanapa-kevitra ny hitady mpanondrana an-tsokosoko hafa aho mba hikarakara izany. Lainga fotsiny ny hevitr'ilay dia azo antoka sy toetr'andro tsara fa nampiasainay mba hampiononana ny tenanay. Fantatro fa mpandainga izy rehetra , mahazo harena amin'ny fanondranana olona.
Rehefa afaka roa andro indray, nahita sambo aho ny farany. Nankany amin'ny trano fivavahana kely iray aho ary avy any no nitondrany anay ho any amin'ny trano tsy misy mpipetraka intsony. Niangona tamin'ny toerana iray izahay rehetra . Avy eo napetrany tamin'ny kamiao lehibe iray izahay rehetra, toy ny andian'ondry. Tonga tamin'ny toerana foana izahay tamin'ny 9 ora alina. Ny feon'ny rano sy ny rivotra no hany sisa re. Tsy navela hiresaka na handrehitra jiro izahay. Noho izany dia nametaka ny salotraina tao anatin'ny maizina. Niantso ireo olona izy ireo mba hanampy rivotra amin'ny famenoana ny fibontsinan'ny sambo . Naharitra teo amin'ny adiny roa izany. Ary rehefa vita, dia nilaza taminay izy ireo mba hidina tsikelikely eny amoron-dranomasina tsy misy tabataba. Rehefa afaka izany, nentiny teny amoron-dranomasina ny zahatra ary nandamina anay mba ho antonona ao anatiny izy ireo. Tsy fantatro mazava tsara na firy izahay na firy, satria efa alina ny andro. Nefa mino aho fa tokony ho eo amin'ny 60 eo miaraka amin'ireo ankizy .
Nipetraka teny amin'ny sisin'ny sambo ny lehilahy ary ny vehivavy teny amin'ny farany aoriana. Nipetraka teo akaikin'ny maotera aho, eny amin'ny ambany indrindra, akaiky indrindra ny rano. Nihevitra izahay fa adiny iray na roa ihany ny dia, na mety alohan'izay. Fa ny zavatra tsy fantatray dia ny hoe nataon’ ireo olona ireo kilalao fotsiny ny fanahinay. Tsy teny an-dranomasina akory izahay. Izany no nahatonga saina ahy ny farany, na dia maizimpito aza ny andro. Karazana renirano kely na lakan-drano ilay izy. ny mpamily izay matetika iray amin'ireo mpitsoa-ponenana no nandefa ny motera. Mamily ny sambo izy ho takalon'ny fandehanany maimaimpoana. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia iray tamin'ireo olon'ny mpanondrana an-tsokosoko izy. Niaraka taminay ny roa tamin'izy ireo mandrapahatonga tany amin'ny toerana izay nieritreretina ho fivarinan'ny renirano any an-dranomasina [vinany].
Noraisiko ny telefaoniko ary nalefako ny GPS. Taitra mafy aho nahita fa lava dia lava ilay lakan-drano. Mbola lavitra ny ranomasina ilay toerana. Nihoatra ora roa no nitondrany anay irery teny. Nihitsoka imbetsaka ny motera tamin'ny ahi-dratsy. Nijanona foana ilay izy noho izany. Rehefa tonga tany an-dranomasina izahay, dia nisy sambo iray hafa niandry mba handray ilay mpamily Tiorka ary nanolo azy tamin'ny mpitsoa-ponenana Alzeriana . Raha nandray ny familiana ilay mpamily vaovao , nandeha mafy nihodikodina be ny sambo, izay nahaforona onja. Nanomboka raiki-tahotra ny olona rehetra tao anaty zahatra . Nikiakiaka niantso izahay ny hoe hiverin-dàlana. Saingy tsy nisy nihaino. Farany, voafehin'ilay Alzeriana ihany ny sambo, ary nanomboka tony izahay. Fa amin'izao dia any anaty ranomasina izahay ary avo dia avo ny onja ka indraindray tahaka ny hoe eny an-tampon'ny tendrombohitra ny sambo ary midina indray avy eo. Tsy nisy hazavana afatsy ny volana. Mamirapiratra eny amin'ny lanitra ireo kintana.
“Raha niakatra sy nidina ny onja ny sambo, nihiaka tamin'ny vavaka ny feon'ireo olona. Fanesoana izany ho ahy satria tsy mahatsiaro an'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona raha tsy sendra zava-tsarotra izy ireo .”
Tsy fantatro ny antony, fa tsy dia natahotra aho. Talohan'ny niakarako tao anaty sambo dia nieritreritra aho fa ny eny an-dranomasina no ampahany dia mampatahotra indrindra , indrindra fa ny amin'ny alina. Rehefa niakatra sy nidina ny onja ny sambo, nihiaka tamin'ny vavaka ny feon'ireo olona. Fanesoana izany ho ahy satria tsy mahatsiaro an'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona raha tsy sendra zava-tsarotra izy ireo . Niha-mafy hatrany ny vavaka arakaraky ny fiakaran'ny sambo amin'ny onja. Nilaza ireo lehilahy fa afaka mahita ny jiro amin'ny nosy izy ireo. Sarotra ny hijanona ho tony rehefa miady amin'ny fahavelomana sy ny fahafatesana. Toy ny tsy manam-pahataperana ny dia. Nahita jiro tamin'ny sambo izahay rehefa afaka adiny roa. Ny Mpiambina ny Morontsiraka Grika izany . Izay vao nahazo aina izahay ny farany. Mbola tsy dia akaiky loatra izany ka mety mbola hitondra onja izay mety hanao anay ambony ambany. Kanefa kosa nandeha taorianay ny onja, nitodika ho any amin'ny jiro manandrify ny nosy ary afaka nahita izany izahay. Efa akaiky izany amin'izao. Tsy fantatro hoe ahoana, fa resin-tory aho nandritra ny minitra vitsy, kanefa ny olona tsy nisy nieritreritra ny hatory.
Niaraka tamin'ny fanampian'ny mpiambina ny morontsiraka, rehefa afaka ora iray hafa , dia tonga soa aman-tsara tao amin'ny nosy izahay. Faly izahay ary velom-pisaorana fa mbola velona taorian'ny ora dimy nampatahotra . Izay ihany no tao an-tsainay tamin'izay fotoana izay.
Mipetraka ao Minden i Rena ankehitriny kanefa mikasa ny hifindra tsy ho ela any Bielefeld, tanàna kely antonony any avaratrandrefan'i Alemaina. Nanao an-tsafa momba ny fifindra-monina i Rena roa volana lasa izay, saingy mbola miandry ny fanekena ny “visa” mandritra ny telo taona.